justfreeman: februari 2010
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ့ 
ပျော်ပျော်နေသေခဲလို့ ဆိုရိုးတွေရှိခဲ့ကြလို့ 
“ မှန်ကန်ရင်ကွဲသည် ” ဆိုတဲ့ “ မှန် ” ဥပမာနဲ့
Posted by justfreeman at 13:050comments
.ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ ယနေ့တွင် ပအို့ဝ် တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာ အဆိုအက၊ စာပေ အနုပညာများ ပါဝင်ပြသသည့် ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော် ကျင်းပသည်။
ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်မှာ အဆိုအတီးများဖြင့် ဖျော်ဖြေနေကြသော ပအို့ဝ် လူငယ်များ (ဓာတ်ပုံ - ဘစောတင်/ဧရာဝတီ)
Posted by justfreeman at 04:080comments
.မြန်မာ့စီးပွားရေး မည်သို့ ဖြစ်မည်ကို နိမိတ်ဖတ်ရသည်မှာ အန္တရာယ်များသော အလုပ် ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းကို ၂ ပိုင်း ခွဲလိုက်မည် ဆိုလျှင်တော့ အန္တရာယ် နည်းသွားဖွယ် ရှိသည်။ တပိုင်းက ယခုနှစ်တွင် မည်သို့ ဖြစ်မည်ဟု မိမိတို့ မျှော်လင့်ချက်ကို မှန်းဆခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အခြား တပိုင်းမှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ် အတွေ့အကြုံ များအရ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်ခြိမ့်မည်ဟု ပြောရခြင်း ဖြစ်သည်။
Friday, 26 February 2010 18:30 ကိုထွေး
.ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ သံတမန်များသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင်များနှင့် ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားကို မေးမြန်းကြကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် NLD၏ ၂၁ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားတွင် တွေ့ရသော NLD အဖွဲ့ဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - AP)
EU သံတမန်များသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များကို သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မဟရင် မနေနိုင်တာကလွဲလို့ … မဖွရင် မနေနိုင်တာကလွဲလို့
အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယား ကရားရေလွှတ် တတွတ်တွတ် မလုပ်အားသေးမီ အိမ်သာမှာ အချိန်ကြာနေတုန်း သူမ၏ ဈေးပြန်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲက ဘိန်းမုန့်တချပ်ကို ရွှေဂျိုးတယောက် ပါးစပ်ထဲသို့ ပလုတ်ပလောင်း ကောက်သွတ်လိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် “မိန်းမရေ ကိုယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ခဏသွားလိုက်ဦးမယ်ကွာ” ဟု ချိုချိုသာသာ လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ကာ စက်ဘီးစုတ်လေးကို အလျင်အမြန် ကောက်ဆွဲလိုက်သည်။ ထို့နောက် လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ ဖင်ထိုင်ခုံလေးပေါ် ရွရွလေး တက်ခွကာ လေပုပ်ထုတ်ကုန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးဆီ ဖြည်းဖြည်းငြိမ့်ငြိမ့်လေး နင်းလာခဲ့သည်။
လေပုပ်ထုတ်ကုန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ ဒီနေ့လည်း ထူးခြားပြန်သည်ဟု ရွှေဂျိုးစိတ်ထဲ ရေရွတ်မိလိုက်သည်။ ခါတိုင်း ရွှေဂျိုးတို့ဝိုင်းဘေးတွင် အဖွဲ့ကျတတ်သည့် သတင်းသမား၊ အေအေပီပီ၊ အေဘီ၊ ဆေးဆရာပါ ပါသည့်အုပ်စုကို တယောက်တလေမျှ မတွေ့ရဘဲ လေအိုးတယောက်သာ ထိုင်နေကျဝိုင်းတွင် စာရွက်လိပ်ကလေးကိုင်ရင်း ပြုံးဖြီးဖြီး ဆီးကြိုနေသည်ကို တွေ့ရ၍ဖြစ်သည်။ ရွှေဂျိုးတယောက် စက်ဘီးဒေါက်ထောက်နေရင်းမှ မအောင့်နိုင်မအည်းနိုင် လေအိုးကို လှမ်းမေးလိုက်သည်။
ရွှေဂျိုး ။ ။ ဗျို့ … ကိုလေအိုး၊ ဟိုဘက်ဝိုင်းက ဆရာသမားတွေ ဒီနေ့ တယောက်မှ မတွေ့ပါလားဗျ။ တယ်ထူးဆန်းနေပါပေါ့လား။
ပိုက်ထွေး ။ ။ မဟုတ်ဘူး အစ်ကိုရွှေဂျိုးရေ၊ သတင်းဆရာတွေက သတင်းညီလာခံရှိလို့တဲ့၊ ဆေးဆရာတွေကတော့ ဆေးညီလာခံရှိလို့တဲ့။ ညီလာခံနှစ်ခုက ရက်တထပ်တည်းကျနေတယ်ဆိုလား ပြောနေသံကြားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပျောက်နေကြတာဖြစ်မယ်။
ရွှေဂျိုး ။ ။ တော်ပါတော့ ပိုက်ထွေးရာ၊ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိတဲ့ မနက်ခင်းလေးကို မင်းအသံကြီးနဲ့ မဖျက်ဆီးစမ်းပါနဲ့။ လုပ်စမ်းပါဦး ရေနွေး (အဲ …) လက်ဖက်ရည်တခွက်လောက်ကွာ။
ရွှေဂျိုး ။ ။ လုပ်စမ်းပါဦး ကိုလေအိုး၊ ခင်ဗျားက ပိုသိမှာပေါ့။ ဒီနယ်မြေမှာ ကိုလေအိုး မသိတာ မရှိသလောက်ပဲဟာ၊ အကျယ်တ၀င့်လေး လင်းစမ်းပါဦးဗျ။
လေအိုး ။ ။ ဘာကို လင်းရဦးမှာလဲ၊ ခုနက ပိုက်ထွေးပြောတာ ဟုတ်နေတာပဲ။ ဒီထက် ဘာပိုသိချင်သေးလို့လဲ။
လေအိုး ။ ။ ဟ … ကိုရွှေဂျိုးနဲ့တော့ ခက်နေပါပြီ၊ ဒီမှာက သတင်းသမားရယ်၊ အေအေပီပီရယ်၊ အေဘီရယ်၊ ဆေးဆရာရယ်ဆိုပေမယ့် တယောက်ကို အတွင်းခံ (အဲ …) ဦးထုပ်နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးစွပ်ထားကြတဲ့ ရောသမမွှေတွေချည်းပဲဟာ။ အေအေပီပီနဲ့ အေဘီတွေလည်း ညီလာခံထဲ ရောက်ချင်ရောက်နေကြမှာပေါ့ဗျ။ ဒါတွေ ထားလိုက်စမ်းပါဗျာ။ အရေးကြီးတာက နားအေးပါးအေးရှိဖို့ပဲမဟုတ်လားဗျ ဟား ဟား ဟား ဟား။
ရွှေဂျိုး ။ ။ ဟား ဟား ဟုတ်ပါပြီ ကိုလေအိုး၊ ခင်ဗျားလင်းမှပဲ ပိုရှင်းသွားပါပြီ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားလက်ထဲ ဘာအလိပ်ကြီး ကိုင်ထားတာလဲဗျ။
လေအိုး ။ ။ အေး … ကျုပ်ကလည်း ဒီအလိပ်ထဲက သတင်းထူး သတင်းဦးအကြောင်း ခင်ဗျားနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အိမ်ကနေ ပရင့်အောက်ထုတ်လာတာဗျ။ သတင်းက ပျောက်နေတဲ့ ဟိုဘက်ဝိုင်းက ဆရာသမားတွေနဲ့လည်း ပတ်သက်နေတယ်ဗျ။
လေအိုး ။ ။ ဟိုတနေ့က ခင်ဗျားကို ကျုပ်ပြောသလို တတုံးစားလည်း မမှတ်၊နှစ်တုံးစားလည်းမမှတ်ဆိုတဲ့သူတွေ အကြောင်းပေါ့ ကိုရွှေဂျိုးရာ။ အခုဟာက သန်းရွှေကြီး ကျွေးမယ့်အတုံးကို စားချင်လွန်းနေတဲ့ ပြည်တွင်းက ဦးသုဝေနဲ့ ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဝင်းတို့က ပြည်ပက လူတွေပါ အတူတကွ သုံးဆောင်ကြပါဆိုတဲ့ အထာနဲ့ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂညီလာခံမှာ သေဖော်လာညှိတဲ့ သတင်းဗျ။ ခေတ်ပြိုင်မှာက အဲဒီသတင်းကို “ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က စနစ်တကျ တပ်ဆုတ်ခြင်းဖြစ်ဟု ဦးသုဝေ သုံးသပ်” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးနဲ့ ဖော်ပြထားတယ်။ အဲ … ဧရာဝတီမှာကတော့ “ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြရန် နိုင်ငံရေးသမား (၂) ဦး ပြည်ပတွင် တိုက်တွန်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖော်ပြထားသဗျ။
လေအိုး ။ ။ ဘာပိုင်ရမှာလဲဗျာ။ သန်းရွှေတို့က လွှတ်ပြီး သူတို့လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပွဲစားလုပ်ခိုင်းလို့နေမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင်တော့လား မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာတင် ဒင်းတို့ ဆွဲစေ့ခံရတာ ကြာလှနေမှာပေါ့။ နွားတွေလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လော်ဘီလာလုပ်တာဆိုတော့ နွားပွဲစားတွေလို့ ပြောရင်လည်း ရသပေါ့ဗျာ။ ဟား ဟား ဟား ဟား။
ရွှေဂျိုး ။ ။ အိုကေ သူတို့နှစ်ယောက်က သန်းရွှေတို့ လွှတ်လို့ လာတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီဘက် သတင်းသမဂ္ဂက အမောင်ယောင်တောင်တောင် (အဲ …) ကိုယ်တော်ချောတွေကရော ဘာဖြစ်လို့ စင်မြင့်ပေါ် ပေးတက်ရတာလဲဗျ။ သူတို့ကပါ အလိုတူ အလိုပါ ဖြစ်နေလို့လား။ သူတို့ရော စားချင်နေကြပြီလား။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် တော်တော်လုပ်တဲ့ လူတွေဗျာ။
လေအိုး ။ ။ ဟိုးထား ဟိုးထား အဲဒီကိစ္စကတော့ အပြောမစောနဲ့ဦးဗျို့။ အသေးစိတ်ကို ဟိုဘက်ဝိုင်းက ပျောက်စေဆရာတွေ ပြန်ရောက်လာမှ စပ်စုကြည့်ရမယ်ဗျ။ ခေတ်ပြိုင်မှာ ဖတ်ရသလောက်ကတော့ “ဒုတိယနေ့အဖြစ် ဆက်လက်ကျင်းပသည့် သတ္တမအကြိမ်မြောက် မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ၏ မီဒီယာညီလာခံတွင် ဗွီအိုအေအသံလွှင့်ဌာနမှ ပြုလုပ်သော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်၌ ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်” လို့ ရေးထားသဗျ။
ရွှေဂျိုး ။ ။ အော် ဒါဆို ကိုကျော်ဇံသာတို့ ဗွီအိုအေက ပွဲဆူအောင် မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂညီလာခံကို ခုတုံးဝင်လုပ်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျ။
ရွှေဂျိုး ။ ။ ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ ကိုသန်းလွင်ထွန်းနဲ့ ကိုကျော်ဇံသာတို့က ငါတို့တော့ ပွဲပဲဆိုတဲ့ မျက်နှာပေါက်တွေနဲ့ ထိုင်နေကြပါလားဗျ။ အံမယ် အံမယ် အန်စီယူဘီက ကိုမောင်မောင်ရော ပါတာကိုးဗျ။ ဟိုဘက်က ထိပ်ပြောင်ပြောင် မျက်မှန်နဲ့က ကိုမောင်မောင်မြင့် မဟုတ်လားဗျာ။ သန်းရွှေကြီးကတောင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်နေ့ကို မကြေညာရဲသေးဘူး။ ဒီလူတွေက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ရွပိုးထိုးနေကြတာလဲဗျ။ ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေ ခေါင်းထဲ ရှင်းနေပြီးသားကိစ္စကို ဒီလူတွေက ရှုပ်အောင် လုပ်ချင်နေတဲ့ သဘောလားဗျာ။ ဟိုတလောလေးကတင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က အန်အယ်လ်ဒီ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မ၀င် ဆုံးဖြတ်ရန် အချိန်မရောက်သေးလို့ ပြောပြီးပြီပဲဥစ္စာ။ အန်အယ်လ်ဒီလို ပါတီကြီးကတောင် ဘာသံမှမဟသေးတာ ငမြောက်ငခြောက်တွေ လာအော်တာကို အရေးလုပ်စရာလားဗျ။ ခက်တယ်ဗျာ ဒီလူတွေနဲ့တော့ ခက်တယ် ခက်တယ်။
မျိုးချစ်သူ/၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို အလုပ်သမားဝန်ကြီးက စိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အလုပ်သမား ဥပဒေ စစ်ဆေးရေးရုံးမှ သိရသည်။
ယခုအခါ ရန်ကုန်တွင် အလုပ်သမားများဆန္ဒပြမှုမှာ လွန်ခဲ့သော၂၀၀၉ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှစ၍ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေသည့် အတွက် ယင်းသို့ စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါရုံးမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
၎င်းက “၀န်ကြီးကတော့ တော်တော်စိုးရိမ်နေတာ။ ကျနော်တို့ကိုလည်း အလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်းကျပ်တဲ့ လုံခြုံရေး မလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ သူဆိုလိုတာက ဖမ်းဆီးတာတို့ ဘာတို့ပေါ့” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် အလုပ်သမားများနှင့် ပတ်သက်သော လခတိုးမြှင့်ခြင်းကိစ္စတို့ကို ညှိနှိုင်း၍သာ ဆောင်ရွက်ကြရန် ၀န်ကြီးက မှာကြားကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာတွင် ဆန္ဒပြရာ၌ ပါဝင်သော အလုပ်သမားတဦးကမူ ၎င်းတို့အား လခတိုးပေးသည်ကို ကြိုဆိုကြောင်း၊ သို့သော် အလုပ်သမားများအား ရာထူးအလိုက် လခတိုးပေးမည့်ကိစ္စကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးမှုမျိုး လုပ်စေချင်သည်ဟု ပြောသည်။
၎င်းက “ဒါကို ဘယ်သူက လုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ ဒါကိုသိချင်တယ်။ အလုပ်သမားတွေ လခတိုးတောင်းတဲ့ကိစ္စ ဘယ်လို ငွေရှင်ကြေးရှင်တွေကမှ နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နေတဲ့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေက အောက်မှာပဲနေရတဲ့ ဘ၀ပါ။ ဆန္ဒပြတာကိုတော့ လူမြင်တာပေါ့ဗျာ” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှစ၍ အလုပ်သမားများက လုပ်အားခတိုးမြှင့်တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီလထိ နောက်ဆက်တွဲဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း၊ နောက်ထပ်ဆန္ဒပြမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပါက ယခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေတဦးက သုံးသပ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ ပြောနေတာကို သတင်းစာတွေမှာ တွေ့ရတယ်။ အခုလို အလုပ်သမားတွေ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမှန်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေကို လုပ်တဲ့အခါ လူထုအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်နေပြီးတော့ တကယ့်ကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်လေ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ (၁၇) ရက်နေ့က လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ပုစွန်အအေးခန်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမား (၁ဝဝ) ခန့်နှင့် စက်မှုဇုန် (၃) ရှိ Weng Hong Hung အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား (၁,၈၀၀) ခန့်က လုပ်အားခတိုးမြှင့်ပေးရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယခုဖေဖော်ဝါရီလ (၈၊ ၉၊ ၁ဝ) ရက်နေ့တို့တွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၃) ရှိ မြဖက်ရှင်အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် Taiyi ဖိနပ်ချုပ်စက်ရုံ၊ OPAL2(အထည်ချုပ်)၊ ကျားလေး (ဖိနပ်စက်ရုံ) တို့မှ အလုပ်သမား (၂,ဝဝဝ) ကျော်တို့က ၎င်းတို့၏ ရပိုင်ခွင့်များကို တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ (၁၆) နှင့် (၁၇) ရက်နေ့ကလည်း အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်းမှ SKY အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြကြရာ လစာကျပ် (၅,၀၀၀) တိုးပေးမည်ဟူသော အလုပ်ရှင်၏သဘောတူမှုကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နအဖ တူးမြောင်းဖောက်ပုံမမှန်၍ ရေနက်ကွင်းပိုတိုး
အောင်ထက်/၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
ရေနက်ကွင်းလယ်မြေများ ကင်းပျောက်စေရန်အတွက် အစိုးရက ဖောက်လုပ်သော တူးမြောင်းမှာ နည်းစနစ် မမှန်ကန် သောကြောင့် ရေနက်ကွင်းဧရိယာ နည်းမသွားဘဲ ပိုမိုတိုးပွားလာနေသည်ဟု ဒေသခံ တောင်သူများက ပြောကြားသည်။
“ဒယ်အိုးကြီး (၃) လုံးလို့ ခေါ်ဆိုကြတဲ့ ကြာကန်၊ အဖျောက်၊ လက်ခိုက် ကျေးရွာ ရေနက်ကွင်းလယ်မြေတွေ ကင်းပျောက်ဖို့ နအဖက ပေ (၇၀) တူးမြောင်း ဖောက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မမှန်တော့ အဲဒီ တူးမြောင်းကြောင့်ကို ရေနက်ကွင်းတွေ ပိုများလာတယ်” ဟု တွံတေးမြို့နယ် စမ်းရွာဒေသခံတို့က ပြောသည်။
နအဖ၏ “ဒယ်အိုးကြီး (၃) လုံး ဖော်ထုတ်ရေး” စီမံချက်အပေါ် ရေနက်ကွင်းဆိုးကျိုးကို နှစ်စဉ်ရင်ဆိုင်နေရသည့် ဒေသခံတို့က ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ညောင်ငူကျေးရွာ တောင်သူတဦးကလည်း “နွေပိုင်းမှာ ပြဿနာမရှိဘူး။ ဒီဒေသက မိုးကာလမှာ ရေများတယ်။ အဲဒီရေတွေက ကွမ်းခြံကုန်း၊ ထန်းတော ရေတံခါးကပဲ ထွက်ပေါက်ရှိတယ်။ ရေတံခါးက (၉) ပေအကျယ် (၈) ပေါက်ရှိတယ်။ ကွင်းတွေထဲက လာတဲ့ မိုးရေပမာဏနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းက အင်အားမမျှဘူး။ အဲလို မိုးရေကို ချောင်းရေက မနုတ်နိုင်တော့ ဒီနယ်တကြော လယ်မြေတွေဟာ ရေပြန့်ကျယ်တွေ ဖြစ်နေတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြစ်ပေါက်မှ စီးဆင်းလာသော (သဘာဝ) ချောင်းမကြီးနှင့် (၂) ဖာလုံခန့်အကွာ၌ ပေ (၇၀) တူးမြောင်းကို လွန်ခဲ့သော (၁၀) နှစ်ခန့်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
“တာရိုး ဘောင် (၂) ဖက်အထိ ပေ (၇၀) ရှိတယ်။ ရေစီးမြောင်းကတော့ ပေ (၅၀) လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ တူးမြောင်း ၀ဲယာမှာ (၁၀) ပေ ရေသွယ်မြောင်းလေးတွေလည်း ဖောက်လုပ်ထားတယ်” ဟု ဒေးဒနော ကျေးရွာတောင်သူတို့က ပြောသည်။
အဆိုပါ တူးမြောင်းသည် ချောင်းမကြီးနှင့် ယှဉ်လျက် ဆင်းလာပြီး အင်းဂလုံးကျေးရွာအနောက်ဘက်၌ ပေါင်းဆုံလျက် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့အ၀င် ထန်းတောကျေးရွာ ရေထိန်းတံခါးမှတဆင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြစ်အတွင်း စီးဝင်သည်ဟု သိရသည်။
တွံတေးမြို့နယ်၊ ဘုရားကြီးတောင်သူတို့ကမူ “ဒီလယ်တွေက နိမ့်လို့နစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ရေထွက်ပေါက်မရှိလို့ နစ်နေတာ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတခုရှိတယ်။ ဒါက တူးမြောင်းနဲ့ ချောင်းမကြီးဆုံတဲ့ အင်းဂလုံး ရေရိုးကွေ့ကနေ ကွမ်းခြံကုန်းမြစ်ပေါက်အထိ တူးမြောင်းကို တောက်လျှောက် ဆက်ဖောက်ဖို့ပဲ။ (၃) မိုင်လောက် ဖောက်ရမယ်။ အဲလို ရေရိုး (၂) ခု ပြိုင်စီးရင် ကွင်းရေနုတ်အား ကောင်းသွားမယ်။ လယ်ကွက်တွေထဲ ဘယ်ရေက ကျန်တော့မှာလဲ။ ဒါပေမယ့် မြစ်ရေ (ရေငန်) မထိုးအောင်တော့ တူးမြောင်းတနေရာမှာ ရေထိန်းတံခါး တည်ဆောက်ရမယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ လယ်မြေတို့သည် မိုးကာလ၌ အမြဲ ရေလျှံနေတတ်သည့်အတွက် မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် မြေဆီသြဇာ သုံးစွဲ၍ အကျိုးမရှိခြင်းကြောင့် (၁) ဧက ပျမ်းမျှ (၁၅-၂၀) တင်းခန့်သာ ထွက်ရှိပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု လွန်စွာအားနည်းခဲ့ကြောင်း၊ နွေစပါးအနေဖြင့်လည်း ရန်ကုန် တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်ဟု စိုက်ပျိုးရေး ပညာရှင်တဦးက သုံးသပ်သည်။
စိုးမိုး/၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
မြန်မာစာပေနယ်ပယ်မှ ကာတွန်းဆရာများသည် ဆင်ဆာရှစ် (၃) ခုကို ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း ဆရာ ရဲခေါင်မဲမောင်က အာဏာရှင်အောက်က မြန်မာ့ကာတွန်းလောက စာတမ်းကို ယနေ့ ဖတ်ကြားတင်သွင်းသည်။
“ကိုယ်ပိုင် ဆင်ဆာဖြတ်လာရတဲ့အခါ ကာတွန်းဆရာတယောက်က အိုင်ဒီယာ တခုရလာရင် ငါ ဒါကိုဆွဲရင် ဆင်ဆာနဲ့ လွတ်ပါ့မလား၊ မလွတ်နိုင်ဘူးလား၊ အဲလို စဉ်းစားလာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ဆင်ဆာလွတ်မယ့် ပုံတပုံကို ဆွဲလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါမျိုးလေးတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ၎င်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
မြန်မာကာတွန်းပညာရှင် အားလုံး၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဘွဲ့ရပညာတတ်များဖြစ်ပြီး အချို့မှာ နိုင်ငံတကာမှ ဘွဲ့ရ ပညာတတ်များ ဖြစ်ကြောင်း၊ အများစုမှာ ကာတွန်း ပညာသင်ကျောင်းများမှ ဆင်းလာခြင်းမဟုတ်ဘဲ နီးစပ်ရာ ဆရာများထံမှ သင်ယူလာကြသူများဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းတွင် ပါရှိသည်။
ပြည်တွင်းမှ မြန်မာကာတွန်းဆရာ အများစုမှာ တလ၀င်ငွေ ကျပ် (၄) သောင်းခန့်သာ အမြင့်ဆုံးရရှိကြောင်း၊ အများစုမှာ ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုန်း မြို့နယ်တို့တွင် နေထိုင်ကြရပြီး ငွေကြေး ချို့တဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း စာတမ်းရှင်က တင်ပြသွားသည်။
ယနေ့ မြန်မာ့မီဒီယာ ညီလာခံ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ရသစာပေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာ ရဲခေါင်မဲမောင်က အာဏာရှင်အောက်က မြန်မာ့ကာတွန်းလောက၊ ဆရာ ဦးစိုးနေလင်းက စာနယ်ဇင်းသမားမှာ လုပ်ချင်၏၊ အမှန်တရားကို ဆုပ်ကိုင်ရဲဝံ့ မရဲဝံ့၊ ဆရာ ဦးငြိမ်းဝေက ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်း မြန်မာကဗျာ နာကျင်မှု စသည့်စာတမ်းများကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းသွားကြသည်။
ပေါက်ပေါက်/၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း တရားမဝင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထမင်းချက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေကြသည့် ဒေသခံအမျိုးသမီးများ တရုတ်နိုင်ငံသား သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဖြားယောင်းလိမ်ညာပေါင်းသင်းမှု ခံရပြီး ဘဝပျက်နေကြကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ပွင့်လင်းရာသီ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာမှစ၍ မေလကုန် မိုးမကျမီ သစ်ထုတ်ယူသည့်ကာလအတွင်း တလ ကျပ် (၄၊ ၅) သိန်းအထိ ထမင်းချက်အဖြစ် ငှားရမ်းထားသည့် ဒေသခံအမျိုးသမီးများကို တရုတ်သူဌေးလောပန်းများနှင့် သူဌေးကိုယ်စားလှယ်များက လိမ်ညာပေါင်းသင်းနေကြကြောင်း သစ်လုပ်ငန်းခွင်နှင့် နီးစပ်သည့် ဗန်းမော်ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မိန်းကလေးတွေက ကချင်မလေးတွေ၊ ဗမာမလေးတွေ များတယ်။ တောထဲတောင်ထဲ ထမင်းချက်၊ ဟင်းချက် လိုက်ဖို့ ဆိုတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေပဲ လိုက်တာ။ အဲဒီမှာ တရုတ်သူဌေးက ငွေနဲ့ဆွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောတောင်ထဲမှာ အနေနီးစပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းသင်းတာပေါ့။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပြန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သစ်အဖမ်းအဆီးရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လောပန်းတွေ ပြန်ရင် သူတို့တွေလည်း လိုက်သွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ တရားဝင်မယားကြီးက ရှိနေတော့ နေလို့မရတာကြောင့် နယ်စပ်မှာ တဝဲလယ်လယ် ဖြစ်ကျန်တာပေါ့။ ရွာပြန်ရင်လည်း လူပြောစရာဖြစ်နေပြီလေ။ အဲလိုနဲ့ ဘဝပျက်ကုန်တာ” ဟု ပြောသည်။
သစ်ရာသီတခုအတွင်း သစ်လုပ်ကွက်များအလိုက် နီးစပ်ရာဒေသအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများကို ငှားရမ်းနေခြင်းဖြစ်ပြီး အရေအတွက်မှာ အနည်းဆုံး (၅ဝ) ခန့်ရှိမည်ဟု အဆိုပါဒေသခံက ပြောသည်။
၎င်းက “တရုတ်သူဌေးတွေ၊ သစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း ဗမာစကားတို့၊ ကချင်စကားတို့ နည်းနည်းပါးပါးတတ်တယ်။ သူတို့က နှစ်တိုင်း ဒီလို သစ်ခုတ်နေတာဆိုတော့ စကားတတ်နေကြပြီ။ ပြီးတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေထဲက သူတို့ မျက်စိကျတဲ့ ကောင်တွေကို လူယုံလိုလို၊ ကိုယ်စားလှယ်လိုလို မွေးထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေက မိန်းကလေးတွေကို ရှာပေးနေတာ” ဟု ပြောသည်။
၎င်းက “မိန်းကလေးတွေ ဒီနယ်စပ်မှာ သောင်တင်နေတတ်တယ်။ အိမ်က ပြန်လိုက်ခေါ်လို့ ပြန်သွားတာလည်း ရှိတယ်။ ဒီမှာ အလုပ်ရှာနေတုန်း နေရေးထိုင်ရေးခက်တော့ နောက်ဆုံး လူပွဲစားတွေနဲ့ ချိတ်မိပြီး တရုတ်မယားလုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင် အရောင်းစား ခံလိုက်တာမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ အဓိကတော့ အဲလို ရောင်းစားခံရတာလည်း ရှိတယ်။ ရတဲ့ငွေကို အိမ်ကို ပါးလိုက်ပြီး သူက အတွင်းထဲ လိုက်သွားတာ” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာပြည်မှ မိန်းကလေးများကို တရုတ်ပြည်အတွင်းပိုင်းသို့ ခေါ်ယူရောင်းစားမှုများရှိနေပြီး ယမန်နေ့ထုတ် နအဖသတင်းစာများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အမျိုးသမီးများရောင်းစားနေသည့် လူပွဲစားများအား မူဆယ်နှင့် လားရှိုးမြို့တို့၌ ဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်း၊ အဆိုပါရောင်းစားခံရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို တရုတ်နိုင်ငံသားများက အဓမ္မထိမ်းမြား လက်ထပ်နေကြောင်း၊ လူပွဲစား၏ စည်းရုံးခံရမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု မခံရရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာက အသိပညာပေးနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာများ ပါရှိသည့်ကား သေနတ်ပစ်ခံရ၊ ၃ ဦး သေဆုံး
သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၇ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းခရိုင်အတွင်း၌ စစ်ဆေးခြင်းမခံဘဲ မောင်းပြေးသည့် တရားမဝင် မြန်မာများ တင်ဆောင်လာသော ကားတစီးကို ထိုင်းလုံခြုံရေးများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရနောင်းမြို့ ရဲစခန်းက ပြောသည်။
ကားပေါ်ပါ မြန်မာ ၁၅ ဦးအနက် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကလေးငယ် ၂ ဦးနှင့် လူကြီး ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၅ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကာ ရနောင်းမြို့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရသည်ဟု တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်း တဦးထံမှ သိရသည်။
“မရပ်ဘဲနဲ့ မောင်းပြေးလို့ ကားကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ပါတယ်။ စစ်သား (တာဟန်) တချို့လည်း ပါတယ်။ ကလေး နှစ်ယောက်၊ လူကြီး တယောက် သေတယ်။ ၅ ယောက်ကို သေနတ်ထိတယ်။ ၇ ယောက်ကို ရဲစခန်းမှာပဲ ဖမ်းထားတယ်” ဟု ရဲတာဝန်ကျက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဖမ်းမိထားသည့် ထိုင်းကားမောင်းသမားကို တာဝန်အရ တားဆီးသည်ကို မလိုက်နာခြင်း၊ တရားမဝင်သူများကို သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာများကိုမူ တရားမဝင်ခိုးဝင်မှုဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ရနောင်းမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၃ဝ ခန့်အကွာရှိ ဟင်းခြံမြို့မှ ချုံဖော်မြို့သို့အသွား စစ်ဆေးရေးစခန်းတခုတွင် ထိုင်းရဲနှင့် စစ်သား ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က မော်တော်ကားအား ရပ်တန့်ရန် တားဆီးခဲ့စဉ် ထိုင်းလူမျိုး ယာဉ်မောင်းက မောင်းနှင်ပြေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရနောင်းဒေသခံတဦးကလည်း ယင်းပစ်ခတ်မှု သတင်းကိုကြားသိရကြောင်းနှင့် ဟင်းခြံမြို့နှင့် ချုံဖော်မြို့အကြားတွင် စစ်ဆေးရေးဂိတ် နှစ်ခုရှိပြီး မသင်္ကာစရာ သတင်းရရှိမှသာ ယာဉ်များကို တားဆီးစစ်ဆေးလေ့ရှိတတ်ကြောင်း ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပစ်ခတ်သည်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ အလုပ်သမားများအရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး ထိုင်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ TACDB မြန်မာပိုင်းတာဝန်ခံ ဦးမြင့်ဝေကမူ ယခုကိစ္စတွင် ထိုင်းလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ၌ တာဝန် ရှိသည်ဟု သုံးသပ်ရန် စောသေးသည်ဟု ဆိုသည်။
“လူကို ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဖုံးလာတာကို လှမ်းပစ်လို့ မှန်သွားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် လူတွေရှိမှန်း သိလျက်နဲ့ တည့်တည့်ပစ်ခဲ့လို့ ထိတာလား ဆိုတာမျိုးတော့ လိုသေးတယ်လေ။ ကားပေါ်မှာ လူတွေ ထိုင်နေတာကို သိသိကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတာတော့ သူတို့က တရားလွန်ကျူးတယ်ပေါ့” ဟု သူက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းခရိုင်တွင် ၂ဝဝ၈ ခု ဧပြီလ၌ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ၅၄ ဦးကို ပင်လယ်စာ တင်ဆောင်သည့် ကွန်တိန်နာယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ခဲ့ရာ အသက်ရှူကြပ်ပြီး အားလုံး သေဆုံးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လနှောင်းပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ဖုတ်ဖရမြို့နယ်အတွင်း၌ ထိုင်းရဲများနှင့် လူမှောင်ခိုအဖွဲ့ ပူးပေါင်းသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမား ၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ သတ်ဖြတ်မှုအတွက် အပြစ်ရှိသည့် ရဲအရာရှိမှာ မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်သွားသော်လည်း တရားခံတချို့ လွတ်မြောက်နေသေးသည်။
ဒေါ်စုအမှု ပြင်ဆင်မှု တရားရုံးက ပယ်ချ
သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၀၂ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လချမှတ်ထားမှုအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းသည်ကို ရန်ကုန် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်က ယနေ့ ပယ်ချလိုက်ကြောင်း ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ အမိန့်ဖြင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲ ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၏ အမှုပြင်ဆင်ချက်ကို ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက တင်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့တွင် ပယ်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“၁ဝ နာရီစပြီးတော့ ၁ဝ နာရီခွဲလောက် ပြီးသွားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တင်တဲ့ အမှုတမှု၊ ဒေါ်ခင်ဝင်းက တမှု၊ နှစ်ခုစလုံး တရားရုံးချုပ်က ပလပ်ပါတယ်။ ပယ်တာပေါ့နော်။ တရားရုံးချုပ်က မဆုံးဖြတ်ပေးဘူးပေါ့။ အရင်အတိုင်းပဲပေါ့” ဟု ရှေ့နေ ဦးဥာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဗဟိုတရားရုံးချုပ်၏ တရားသူကြီး ဦးဟန်ရှိန်က စီရင်ချက် အောက်ဆုံးအပိုဒ်ကိုသာ ဖတ်ပြသွားသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်ချက်အား မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များဖြင့် “ပယ်လိုက်” သည်ကိုမူ မသိရသေးဟု ဆိုသည်။
ယနေ့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ၄ ဦး တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တရားဥပဒေနှင့် မညီကြောင်း ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်းက ယူဆသည်။
အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ် စသည့် အနောက်နိုင်ငံများမှ သံတမန်များလည်း ယနေ့ တက်ရောက်လေ့လာခဲ့သည်။
ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်ချက် လျှောက်ထားမှုကို အထူးအယူခံရုံးသို့ အမြန်ဆုံး ဆက်တင်မည်ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော နေအိမ်အတွင်း တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၌ သူမကို ၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလို သူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူနေသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ မဝင်းမမ တို့ကိုလည်း နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူကို ကူညီမှု ပုဒ်မ ၂၂/ ၁ဝ၉ ဖြင့် ပြစ်ဒဏ်တူချခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားသည်ကိုလည်း တရားရုံးက ပယ်ချလိုက်သည်။
.အစဉ်အလာ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အားနည်းသူများလို့ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အမျိုးသမီးတွေဟာ မိသားစုအတွင်းမှာရော၊ ပြင်ပမှာပါ အမျိုးသားများအပေါ်မှာ မှီခိုနေရသူများအဖြစ် ခွဲခြားဆက်ဆံခံခဲ့ကြရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို မျိုးဆက်သစ်ပြန့်ပွားရေး၊ အိမ်မှုကိစ္စပြုလုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်သာ သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပြီး အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကဏ္ဍကို လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ နိုင်ငံရေးရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုသဘောတရား၊ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို လျော့နည်းစေတဲ့ အကြောင်းတရားများနဲ့ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်မယ့် မဟာဗျုဟာများအကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြပါမယ်။
နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိစေမယ့် အစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပေါ်မှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါဝင်ပတ်သက်ရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ပါဝင်ရတာ ရှိသလို အတိုက်အခံအဖြစ် ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေလဲ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များက နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုဆိုတာကို ပုံသဏ္ဍာန်နှစ်မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားကြပါတယ်။ ပထမတမျိုးကတော့ သမရိုးကျ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ conventional politics သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ဒီလိုသမရိုးကျ နိုင်ငံရေးရာတွေကို လုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့ totally inactive လူတွေရှိသလို၊ နိုင်ငံရေးသမားဘဝကို အလုံးစုံ ခံယူသွားတဲ့ complete activists တွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ voting specialsts တွေ၊ မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ သက်ဆိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးရာလောက်ကိုပဲ စိတ်ဝင်းစားတဲ့ parochial participants တွေ၊ ဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ campaigners တွေစသည်ဖြင့် လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေ ရှိပါတယ်။
အခုလို သမရိုးကျနိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တာမဟုတ်ပဲ ချီတက်ပွဲတွေ၊ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ တော်လှန်းရေးဆင်နွှဲမှုတွေအနေနဲ့ ပါဝင်တာကိုတော့ Contentious Politics အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ နှိင်ငံရေးရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုလို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်နှစ်မျိုးမှာ တူညီမှုတွေ ရှိသလို ခြားနားမှုတွေလဲ ရှိပါတယ်။ တူညီမှုတွေကတော့ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ပုံစံနှစ်မျိုးလုံးမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူ့အဖွဲ့အစည်းက လေးစားမှုရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်နေတတ်သလို ပုံမှန်စနစ်တကျ စီမံချက်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလဲ အသွင်နှစ်မျိုးလုံးမှာ ရှိပါတယ်။ ခြားနားချက်ကတော့ contentious politics ဟာinstitutionalized political boundaries ရဲ့ ပြင်ပမှာ လှုပ်ရှားတာဖြစ်သလို၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများကလဲ ဒီလို institutional channels တွေဟာ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဆယ်ရာစုကာလ မတိုင်ခင်အထိ ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်နှစ်မျိုးလုံးမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေ အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလရောင်တော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ တိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ contentious politics မှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှုန်းဟာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသလို conventinal politics မှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာကြတဲ့ အမျိုးသမီးပါလီမန်အမတ်တွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလဲပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ အတွေးအခေါ်တွေရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ခေတ်မှီမှု နောက်ကျနှေးကွေးတဲ့ အမျိုးသားတစ်စုကသာ အာဏာရနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျတော့ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို လျော့နည်းစေသော အကြောင်းရင်းများ
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံလေ့လာသူ Eisenstein ကတော့ အမျိုးသားတွေ ဦးဆောင်လွှမ်းမိုးတဲ့ စနစ်အနေနဲ့ Patriarchy ဟာ ဇီဝဗေဒအရ ကွဲပြားမှုရှိနေတဲ့ ကျား၊ မကို အမျိုးသားတွေအပေါ် အလေးပေးထားတဲ့ လူနေမှုစနစ်ပုံစံထဲက အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတွေအဖြစ် အစဉ်အဆက် ခွဲခြားလာမှုတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဝေးကွာလာတယ်လို့ ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံလေ့လာသူ Rich ကလဲ Patriarchy ဆိုတာကို အမျိုးသားတွေကနေ တိုက်ရိုက်အင်အားတွေ၊ ဖိအားပေးမှုတွေ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ အဆိုအမိန့်တွေ၊ ဘာသာစကားတွေ၊ ပညာရေးစာအုပ်စာတမ်းတွေ၊ အလုပ်ခွဲဝေသတ်မှတ်မှုတွေ၊ ဘာသာတရားအဆိုအမိန့်တွေကို အသုံးပြုပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ဘယ်ကဏ္ဍမှာပါရမယ်၊ မပါရဘူး စသဖြင့် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တဲ့ လူမှုရေး၊ ဝါဒဖြန့်ချိရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စနစ်တခုလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီလို အတွေးအခေါ်တွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်တွင်းဝန်းကျင်မှာသာ မိခင်၊ ဇနီးအနေနဲ့ နေထိုင်ကျင်လည်စေပြီး၊ အမျိုးသားတွေကိုသာ public sphere နဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ကိုယ့်ဘဝအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးရာတွေမှာ အမျိုးသမီးရဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေ အားနည်းလာခဲ့ကြတာပါ။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ တိုးတက်တဲ့ အမြင်ရှိတဲ့ အမျိုးသားအချို့ကြောင့်သာ နောက်ပိုင်းမှာ တစတစ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ပါလီမန်အမတ်ရွေးချယ်ခံခွင့်၊ ဆန္ဒပြပွဲများမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခွင့် စတဲ့ အခွင့်အရေးတွေရရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ အခွင့်အရေးဆိုတာ အိမ်ထဲ ထိုင်နေရုံနဲ့ အလိုလိုရလာမယ့် အရာမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး မိမိမှာ ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါမယ်။ ဒီအတွက် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက အသိပညာပေးရပါမယ်။ ဒီလိုလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲ တောင်းယူ၊ တိုက်ယူရပါမယ်။ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးကို တခြားလူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူတစ်စုရဲ့ လက်ထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုးအပ်ပြီး ချုပ်ကိုင်ခြယ်လှယ်ခွင့်ပေးထားရင် လူဖြစ်ရကျိုးမနပ်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းဟာ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးကို ခံစားခွင့် ရှိသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ အမျိုးသားများကသာ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုဟာလဲ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေမှာ၊ အစိုးရထဲမှာ အမျိုးသားတွေပဲ ပါဝင်နေခဲ့ရင် နိုင်ငံရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အမျိုးသားအမြင်နဲ့သာ ကြည့်ရှုဆုံးဖြတ်တတ်ကြတာကြောင့်၊ လူဦးရေတစ်ဝက်ကျော်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လျစ်လျူရှုထားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရတွေကို လူထုအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ အစဉ်အလာတွေအရ အမျိုးသားတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်သွယ်လာရင်တောင် ဇနီး၊ မိခင်တွေအနေနဲ့သာ ခေါ်ဆောင်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို contentious politics conventional politics တွေမှယ အမျိူးသမီးတွေ ပါဝင်လာတယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။
(၃) ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ စီးပွား၊ လူမှုရေးရာ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ် ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေး ပါဝင်ပတ်သက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခက်က အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေအပေါ် မှီခိုသူတွေလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင်တွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ အပေါ် နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုစတာတွေဟာ အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ နိုင်ငံအများစုရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးများအကြား ကွဲပြားခြားနားမှု (gender disparities) တွေရှိနေဆဲပါပဲ။ တကယ်တော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ လူဦးရေ တဝက်ကျော်ကို ကိုယ်စားပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေတွေ ယုတ်လျော့နေခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေတွေ ယုတ်လျော့နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က အလုပ်ခွဲဝေမှုနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အိမ်မှုကိစ္စတွေ၊ ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေကို အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလုပ်လို့ ယူဆထားတဲ့ အစဉ်အလာတွေကြောင့် အချိန်ရှားပါးမှုပြဿနာကို အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ဥပမာ- အမျိုးသမီတစ်ယောက်ဟာ အိမ်မှုကိစ္စတွေ၊ ချက်ပြုတ်ရေးတွေကိုလဲ အလုပ်မသွားခင်ပြုလုပ်ရမယ်၊ အိမ်ဝင်ငွေအတွက်လဲ အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ အလုပ်ကပြန်လာရင်လဲ ကလေးသူငယ်တာဝန်တွေ၊ ချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်တွေပါ ယူရမယ်၊ သူ့အမျိုးသားကတော့ အလုပ်လေးပဲ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ဒီအမျိုးသားဟာ မိသားစုတာဝန်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကိုသာ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းအဆင့်မှာသာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အလုပ်တာဝန်ကို ညီညီမျှမျှ ခွဲဝေဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မိသားစုအရေးကို ကျား၊ မ မခွဲခြားပဲ အတူတူဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဟာ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ တာဝန်ကျေမှုတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လူ့ဘောင်လောက သာယာချမ်းမြေ့ရေးကို အားပေးထောက်ကူပြုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများရဲ့ အချိန်ရှားပါးမှု၊ ဝန်ပိမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းအပေါ်၊ နုင်ငံရေးရာတွေအပေါ် contribution လုပ်နိုင်မှုရာနှုန်းတွေ တက်လာပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း တိုးတက်မှုဆိုတာ ချောတိုင်တက်တာနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး တိုးတက်ဖို့ ပခုံးပေါ်ပဲနင်းနင်း၊ ခေါင်းပေါ်ပဲနင်းနင်း ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအမြင့်ရောက်ဖို့ကို အားပေးကူညီကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဒီချောတိုင်ပေါ် သူမတက်ရ၊ ငါမတက်ရ ခွဲခြားပြီး လုပ်နေကြမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးမှုရောဂါ စတင်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါ တစတစ ကူးစက်ပျံ့ပွားလာတာနဲ့အမျှ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးစေတော့တာပါပဲ။
အမျိုးသမီးများရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှု တိုးမြှင့်ရေး မဟာဗျူဟာများ
(၁) Gender quotas
နှစ်ဆယ်ရာစုနှေင်းပိုင်းကစပြီး နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ဒီမဟာဗျူဟာကို စတင်ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။ နိုင်ငံရေးရာမှာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးအကြား gender gap ဖြစ်နေတာကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အချို့သော အမျိုးသမီးများကို power structure အတွင်း ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ပြီး ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမဟာဗျူဟာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြန်အလှန်ငြင်းခုန်မှုတွေကတော့ ရှိုနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် gender gap ပြဿနာဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေကို power structure ထဲ များလာအောင် ထည့်သွင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ပေါ်လစီရေးရာ ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက် power structure ကို ထောက်ကူပေးနိုင်မယ့် supporting mechanisms အများအပြားလဲ လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီလိုဆောင်ရွက်လာတဲ့ အခါမှာ elite women တွေပဲ ပါဝါထဲမှာ ပါလာတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပြီး၊ လူထုလူတန်းစားအသီးသီးက အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားမပြုသလို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေကို political empowermenr လုပ်ရာမှာ gender quotas ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ redistributive justice နဲ့ ဆက်စပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးများ အချင်းချင်း ကွန်ယက်တည်ဆောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကွာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကနေ ရုတ်တရက် gender quotas ကြောင့် နိုင်ငံရေးထဲ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံရေးအသိပညာ အားနည်းမှုကြောင့် နိုင်ငံရေးနဲ့ အစိုးရ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေ ညံ့တာ၊ အသုံးမကျတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ဆိုတာကို အမျိုးသမီးတွေကသာ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေကို ပါဝင်ခွင့် မပေးခဲ့တာကြောင့် နားကလည်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေကို သင်တန်းပေးမှုတွေ၊ hands-on experiences တွေနဲ့ အမျိုးသားများက လက်တွဲခေါ်ရမှာ ဖြစ်သလို၊ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးသမား အချင်းချင်းကလဲ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု၊ လက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုတွေ ပြုလုပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကgender quotas နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရည်အချင်းအရ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မလေးမစား ဆက်ဆံခံရမှုတွေ၊ အရေးမစိုက်မှုတွေ၊ ဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ၊ အမျိုးသမီးအကြီးအကဲရဲ့ တာဝန်ပေးမှုဆိုပြီး ဂရိမစိုက်မှုတွေ စတဲ့ ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်ကြရတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေကို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးကွန်ယက်တွေ လိုအပ်လှပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တချို့သော နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် အမျိုးသမီးလူဦးရေဟာ အမျိုးသားလူဦးရေထက်ကို ပိုပြီးများနေပါတယ်။ ဒီလို လူဦးရေ တဝက်ကျော်ရဲ့ တိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးအောင်၊ တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးအောင် ပြုလုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ရေမြင့်မှ ကြာတင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများနိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှု လျော့နည်းတာဟာ ရေနည်းနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မြင့်မားမှုဆိုတဲ့ ကြာပန်း တင့်တင့်တယ်တယ်ပွင့်လာဖို့က အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလဲ အများကြီး မူတည်လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုကို လျော့ကျစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းများကို ဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားကြရင်း မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်မှုကနေ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တိုးတက်မြင့်မားဖို့ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၉၊ ၃၊ ၂၀၀၉)
Eisenstein,Z (1984) Contemporary Feminist Tnought, Unwin, London
Keck, M. & Sikkink, K. (1998) Activit Beyond Borders: Advicacy Networks in International Politics, Cotnell University Press, NY
Kennedy- Pipe, C. (2007) “Gender and Security“ in Collins, A.(ed.) Contemporary Security Studies, Oxford University Press, Oxford
Lovenduski, J. (1992) “Gender and Politics“ in Hawkesworth, M. & Kogan. M. ( eds)
Encyclopedia of Government and Politics, Routledge, London & NY
Phillops, A. (1998 ) Feminism & Politics, Oxford University Press, Oxford
UWSA ခေါင်းဆောင် စစ်အစိုးရနှင့် တွေ့မည်
Thursday, 25 February 2010 19:20 ရန်ပိုင်
.၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူချန်းသည် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး အစီအစဉ် အတွက် စစ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တန့်ယန်းမြို့သို့ ယနေ့ ရောက်ရှိလာကြောင်း တရုတ် မြန်မာ နယ်စပ် အရေး စောင့်ကြည့်သူများက ပြောသည်။
၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပေါက်ယူချန်း (ဓာတ်ပုံ - ခေတ်ပြိုင်)
တပ်အသွင် ပြောင်းလဲရေးကို အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်သူဟု စစ်အစိုးရက ယူဆထားသည့် ဦးပေါက်ယူချန်းသည် ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် ဖိအားပေး ခံနေရသည်ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ် အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က ဆိုသည်။
“အရင်က ( ဦးပေါက်ယူချန်း) ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ ပြောထားတာ အခု တရုတ်က ဖိအားပေးလို့ သွားတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ အခြေစိုက် ဦးစိန်ကြည်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တန့်ယန်းတွင် ဦးပေါက်ယူချန်းနှင့် တွေ့မည့် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အကြီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်သည် မကြာသေးမီက ယူနန်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်၍ UWSA ကို ဖိအားပေးရန် တရုတ်အစိုးရကို အကူအညီ တောင်းခံခဲ့သည်ဟု အတည် မပြုနိုင်သည့် နယ်စပ်သတင်းများ အရ သိရသည်။
သို့သော်လည်း စစ်သည် အင်အား ၃၀၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် UWSA တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပြောင်းရေးကို ဦးပေါက်ယူချန်း တဦးတည်း သဘောဖြင့် လုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်ကြောင်း တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် စစ်ရေးနိုင်ငံရေး အကဲခတ် ဦးအောင်ကျော်ဇောက သုံးသပ်သည်။
စစ်အစိုးရသည် ယခုနှစ် ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အပစ်ရပ် အဖွဲ့များကို နယ်ခြားစောင့် တပ်များ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲရေးကို လိုလားနေကြောင်း သိရသည်။ ဤအတောအတွင်း တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များက အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်တိုက် တွေ့ဆုံနေကြသည်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSA-N) အဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလွယ်မောင်း နှင့် တပ်မဟာ ၃ တပ်မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး လှမြင့်တို့သည် အင်္ဂါနေ့က တြိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်သန်းထွဋ် နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဦးစိန်ကြည်က ပြောသည်။ သို့သော်လည်း မည်သည့် ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်ကို မသိရသေးပေ။
ရှမ်းပြည်နယ် အခြေစိုက် မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့ ခေါ် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ် တပ်မတော် (NDAA) ခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်းလင်းသည် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် မကြာမီ တွေ့မည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် လကလည်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရြဲမင့်က ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ခေါင်းဆောင်များကို မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
KIA အဖွဲ့က ၁၉၄၇ခုနှစ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် ပင်လုံစာချုပ် တွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအတိုင်း ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်မည်ဆိုလျှင် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို လက်ခံမည်ဟု တုံ့ပြန်ထားသည်။
စစ်ရေးတင်းမာမှု ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် KIAက အပစ်အခတ် ရပ်စဲသည့် ၁၆နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို အင်္ဂါနေ့က ပြုလုပ်ရာ စစ်ရေးပြပွဲများ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင်လည်း တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA)၊ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် ဦးစီးသော ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တို့သည် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းနှင့် ယခုလအတွင်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု DKBAတာဝန်ခံ တဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် DKBA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အများစုက နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့ရေးကို လက်ခံလိုခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ယခုလကုန်တွင် အပြီးသတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် စစ်အစိုးရက အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ထားသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် အစီအစဉ်သည် ပြီးခဲ့သည်နှစ် ဧပြီလမှ စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ ကချင် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် (NDA-K) ၊ ကရင်နီပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (ကလလတ) နှင့် ကိုးကန့် အထူးဒေသ(၁) စသည့် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့သာ နယ်ခြားစောင့် တပ်များ အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် လောက်ကိုင်အခြေစိုက် ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင် တပ်များကို ၂၀၀၉ သြဂုတ်လက စစ်အစိုးရ တပ်များ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကိုးကန့် အထူးဒေသ(၁) သည် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နယ်ခြားစောင့် အစီအစဉ်ကို လက်ခံခြင်း မပြုသည့် တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များကို စစ်အစိုးရက စစ်ရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းဖွယ်ရှိသည်ဟုလည်း အကဲခတ်တချို့က ခန့်မှန်းကြသည်။
မြန်မာ့ အလင်း နှင့် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးစီးပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့မှ ၁၈ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟူသော လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ စစ်ရေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နယ်မြေခံလူထုအား စည်းရုံးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အကဲခတ်များက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြရန် နိုင်ငံရေးသမား ၂ ဦး ပြည်ပတွင် တိုက်တွန်း
Thursday, 25 February 2010 17:24 ဇာနည်ဝင်း
.ရန်ကုန်အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးသမား ၂ ဦးက ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ်နေသည့် စာနယ်ဇင်း ညီလာခံတခုသို့ ယနေ့ တက်ရောက်ပြီး တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်သည်။
သံဃာတော်များအပေါ် ပိုမိုတင်းကျပ်ရန် ပြင်ဆင်နေ
Thursday, 25 February 2010 16:11 ဝေမိုး
.စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယက အဖွဲ့က ပြည်တွင်း သံဃာတော်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမို ကန့်သတ် ချုပ်ချယ် နိုင်ရန်အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များ ထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ နံနက်ပိုင်း ဆွမ်းခံကြွရန် စီတန်းနေသော သံဃာတော်များကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AP)
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယက အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အရှင် ကုမာရာက သာသနာရေး တိုးတက် ကောင်းမွန် လာစေရန် အတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အသစ်များ ထုတ်ပြန်ရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ကြီးများ အားလုံးနှင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထား သည်ဟု ပြောကြောင်း တနင်္ဂနွေ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ဖေါ်ပြပါရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အသစ်များ ထုတ်ပြန် ခြင်းသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဝေဖန်သူများက နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယကအဖွဲ့အား ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်မှု များကြောင့် ညှိုးနွမ်း ခဲ့ရသော “ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်” အထောက် အကူ ဖြစ်စေ လိမ့်မည်ဟု အရှင် ကုမာရာက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းလုံးရှိ သံဃာတော်များသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ အပြီးမှစ၍ အာဏာပိုင်များ၏ တင်းကျပ်စိစစ်ခြင်းကို ခံနေကြရသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့အနေနှင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဓိက ဂိုဏ်းအားလုံးမှ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူခြင်းသည် တမူထူးခြားကြောင်း၊ သံဃာတော်များ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ် သည်ဟု ယူဆ၍ အစိုးရက နောက်ထပ်တကြိမ် နှိမ်နင်းရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများက ပြောဆိုကြသည်။
“ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံက ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ အစည်း အဝေးက သီးခြား ခွဲလုပ်တာပါ။ အခုလိုမျိုး ဂိုဏ်း ၉ ဂိုဏ်းက ဘုန်းတော်ကြီးတွေပါ တပေါင်းတည်း အစည်းအဝေးထိုင်မယ်ဆိုတာ က နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့အနေနဲ့ တခုခုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်”ဟု ပြည်ပ၌ သတင်းသုံးနေသည့် သံဃာတော် အရှင် အစ္စရိယ က ပြောကြားလိုက်သည်။
အရှင် အစ္စရိယသည် ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့ တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ဆုရသည့် စာသင်သား သံဃာတော်တပါး ဖြစ်သည်။
သံဃာတော်များအပေါ် ပိုမိုတင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ရေး၌ စစ်အစိုးရက ကြိုးကိုင်နေသည်မှာ သိသာထင်ရှား ကြောင်းလည်း လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများက ပြောသည်။
“နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်ကြီးတွေ ဦးဆောင်တယ်ဆိုပေမယ့် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာန က ထိန်းချုပ်ထားတာ”ဟု လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ထိုင်းနိုင်ငံဌာနခွဲမှ အရှင် ဇ၀န က ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး“၀န်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သံဃမဟာနာယက က ဘာမှ လုပ်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ သံဃမဟာနာယက က သံဃာတော်တွေကို သင်္ကန်းချွတ်ဖို့နဲ့ ထောင်ချဖို့ အတွက် စစ်အစိုးရကို ခွင့်ပြုခဲ့တာပဲ”ဟု ပြောသည်။
အရှင် ဇ၀နသည် စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့်အတွက် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၌ သင်္ကန်းချွတ်ခံရပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၆ နှစ် အကျဉ်းချခံခဲ့ရ သော သံဃာတပါးဖြစ်သည်။
အရှင် ဇ၀န သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၌ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးနောက် သာသနာ့ဘောင် ပြန်ဝင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် နိုင်ငံရေးကိစ္စနှင့် ထောင်ကျဖူးသဖြင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယမန်နှစ် နှောင်းပိုင်း၌ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပြီးမှသာ သာသနာ့ဘောင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သူများဟု သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော သံဃာတော်များကို တစိပ်တပိုင်းမှ ကြိုးကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သံဃာမှတ်ပုံတင် အသစ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ထုတ်ပေးခဲ့သဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြင့် အာဏာပိုင်များက ခြေရာခံနိုင်ကြောင်း သံဃာတော်များက ဆိုသည်။
“မှတ်ပုံတင်အသစ်မှာ သံဃာတော်တွေကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအလိုက် အရောင်ခွဲပြီး ထုတ်ပေးတာ”ဟု ၂၀၀၇ လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် အကျဉ်းစံ အရှင် ဂမ္ဘီရ နှင့် ရင်းနှီးသည့် အရှင် ကေသရိယ က ပြောသည်။
သံဃာတော်များသည် စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှု တခုတည်းကိုသာ ခံနေရသည် မဟုတ်ဟု ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ဆန္ဒပြပွဲ များ အတွင်း ပါဝင်ခဲ့သည့် တခြားသော သံဃာတော်များကလည်း ပြောသည်။
ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသော သံဃာတော်များသည် မိသားစုများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ကျောင်းထိုင်းဆရာတော်များ၏ တင်းကျပ်မှုကို ခံနေကြရကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အခုဆိုရင် သူတို့မိဘတွေက သူတို့ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ပါချင်တယ်ဆိုရင် ရဟန်းဘောင်က ထွက်ဖို့ ပြောနေကြတယ်”ဟု ၂၀၀၇ ဆန္ဒပြပွဲများအား ဦးဆောင်ခဲ့သော သံဃာတပါးဖြစ်သည့် အရှင် နေမိန္ဒ က ပြောသည်။
“ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေကလည်း ရဟန်းငယ်တွေကို လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပါချင်တယ်ဆိုရင် ကျောင်းက ထွက်သွားဖို့ ပြောနေကြတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ရန်ကုန်တွင် ကြက်ဘဲ အရောင်းအ၀ယ် ကန့်သတ်
Thursday, 25 February 2010 18:09 ဧရာဝတီ
.ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ကြက်ခြံ တချို့တွင် ကြက်ငှက် တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး တွေ့ရှိရ သောကြောင့် ကြက်ဘဲ ရောင်းဝယ်ရေး ဒိုင်ကြီး တခုဖြစ်သော မင်္ဂလာ တောင်ညွှန့် ကြက်ဘဲဈေးသို့ တင်ပို့ ရောင်းချမှုကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း ကြားသိရသည်။
ယင်းသို့ ကန့်သတ်မှုကြောင့် တနေ့လျှင် အသားတိုးကြက်ပိဿာချိန် ၆၀၀၀၀ ခန့် နေ့စဉ် ၀င်ရောက်လျက်ရှိရာမှ ယခု အခါတွင် ပိဿာချိန် ၃၀၀၀၀ ခန့်သာ ၀င်ရောက်မှုရှိတော့ကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ကြက်ဘဲဈေးဒိုင်မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
“ကြက်အ၀င် ထက်ဝက်လောက်အထိ ကျသွားတယ်၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ထောက်ကြံ့နဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ထဲက ခြံတွေမှာ ကြက်တုပ်ကွေး တွေ့တယ်လို့ ကြားပြီးကတည်းက အဲဒီဘက်ခြံတွေကနေ အ၀င်ပိတ်လိုက်ရတယ်”ဟု ကြက်ဘဲဒိုင် တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ထိုကြက်ဘဲဈေးတွင် ကြက်တချို့သေဆုံးကြသော်လည်း ရိုးရိုးရောဂါဖြင့်သာ သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းဖြန့်ထားကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခုအခါ ကြက်ဘဲဒိုင်များတွင် နေ့စဉ်ထုံးမှုန့်ဖြူးခြင်း၊ ပိုးသတ်ဆေးရည်များ ပက်ဖျန်းခြင်း၊ ကြက်နှင့်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရသော လူများကိုလည်း ခြေအိတ်၊ လက်အိတ်များ ၀တ်ဆင်စေပြီး သန့်ရှင်ရေးကို အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားနေကြောင်း တွေ့ရှိရသော်လည်း လူအများ ကြက်သားစားသည့်နှုန်းနှင့် ကြက်သားဈေးနှုန်းများ လျော့ ကျ မသွားကြောင်း ကြက်ရောင်းဝယ်ရေးသမားများက ဆိုသည်။
“ကြက်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးတွေ့ရပေမယ့် လူတွေက အရင်ကလို ကြက်သားစားတာ လျော့ကျသွားတာမျိုးတော့ မရှိတော့ဘူး၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတင်းမထုတ်ပြန်တာလည်းပါတယ်၊ နောက်တခုက ကြက်သားဈေးက ခုချိန်ထိ ကျမသွားတော့ လူတွေက ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး သိပ်မကြောက် ကြတာလည်းပါတယ်”ဟု မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ဈေး ကြက်သားအရောင်းဆိုင်တဆိုင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ပြန်လည်နေရာချထားရေးရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်တစ်ခုတွင် မွေးမြူထားသော တိုင်းရင်းကြက် တချို့ သေဆုံးသဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ဖေဖော်ဝါ၇ီ ၁၉ ရက်တွင် ပေးပို့ခဲ့ရာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ (Highly Pathogenic Avian Influenza-HPAI) ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီဌာနမှလည်း ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ပပျောက်ရေး အချင်အမြန်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ် တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဒေါက်တာခင်လှိုင်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ မရမ်းမြို့နယ်ရှိ ကြက်မွေးမြူရေးခြံတခြံတွင်လည်း အပြင်းစားကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှု တွေ့ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများကကြောညာခဲ့ပြီးနောက် မရမ်းကုန်းတ၀ိုက်ရှိဈေးများတွင် ကြက်နှင့်ကြက်ထွက် ပစ္စည်း ရောင်းချမှု ကန့်သတ်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသည်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိရသောကြောင့် ဆောင်းခိုငှက်ရိုင်းများမှ တဆင့် ရောဂါကူးစက် ခံရခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင် တချို့က ပြောသည်။
“၂၀၀၉ တနှစ်လုံးရောဂါမဖြစ်ခဲ့ဘဲနဲ့အခုပြန်ဖြစ်တယ်၊ ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလည်း ဆောင်းခိုငှက်ရိုင်းတွေ အများဆုံးလာတဲ့ အချိန် မှာဖြစ်တော့ ငှက်ရိုင်းက ရောဂါကူးစက်တယ်လို့ ယေဘုယျဆို နိုင်ပါတယ်”ဟု မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တိရိစ္ဆာန် ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ အငြိမ်းစားအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တနှစ်လုံးတွင်ရောဂါမဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဤသတင်းအား ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဧရာဝတီ သတင်းထောက်များ ပူးပေါင်းရေးသားသည်။
Posted by justfreeman at 12:000comments
Thursday, 25 February 2010 16:54 ကိုထွေး
.ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံး ယာယီ တာဝန်ခံက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ (CEC) ၀င်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် NLD ၏ သဘောထား၊ နိုင်ငံရေး အမြင်များကို မေးမြန်းကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကလည်း နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မက်ဒလင်း အောဘရိုက်(Madeline Albright) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်၍ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တချို့ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေဆုံခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က စနစ်တကျ တပ်ဆုတ်ခြင်းဖြစ်ဟု
NEJ/ ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
စစ်အစိုးရက ယခု ကျင်းပမည်ဆိုသည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ရှေ့တိုးဝင်ရောက် စွက်ဖက်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ နောက်တလှမ်းဆုတ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးသုဝေက သုံးသပ်လိုက်သည်။
“ကျနော့်အမြင်တော့ တပ်က နောက်ဆုတ်နေတာ။ ရှေ့တိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မှူးကောင်းတို့မည်သည်ကား တပ်ကို ဆုတ်တဲ့ အခါမှာ အစီအစဉ်တကျ ဆုတ်ရပါတယ်။ အခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို နောက်ခံထားပြီး ဆုတ်တာဖြစ်တယ်” ဟု လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးသုဝေက ပြောကြားသည်။
“ပြည်သူ့ဆန္ဒ အရင်သုံးသပ်ပါတယ်။ အစိုးရ သဘောဆန္ဒက ဘယ်လိုလဲ သုံးသပ်ပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့မှ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်သင့် မ၀င်သင့် ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်တာပါ။ လွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ဦးသုဝေက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ စနစ်တကျ ဆုတ်ခွာခြင်းဟု ပြောကြားလိုက်ပြီး သူ့အနေဖြင့် မြန်မာလူငယ်များ၏ သဘောဆန္ဒအရ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးသုဝေက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အတည်မပြု လျစ်လျူခဲ့သော၊ ပြည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်နေသော စစ်တပ်အနေဖြင့် ယခုရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က နောက်ဆုတ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာပါကလည်း စစ်တပ်အနေဖြင့် အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တက်ရောက်လာသည့် သတင်းစာဆရာ တဦးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်တပ်က နေရာမရခဲ့သည့်အတွက် အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ စစ်တပ်က နေရာအခိုင်အမာ ယူထားပြီးဖြစ်ရာ အရပ်သားအစိုးရသစ်တရပ် ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါကြောင်း ဦးသုဝေက တုံ့ပြန်သွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယခုလ (၁၅) ရက်တွင် (၅) ရက်ကြာခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ကာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကို လေ့လာသွားသည့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနားက ယခုနှစ် နအဖစစ်အစိုးရ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမည့် ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်တွင် ဦးသုဝေက ယခုကဲ့သို့ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂညီလာခံ၌ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 11:510comments
နှလုံးခွဲစိတ်မှု စရိတ်ကြီး၍ လူနာများ အသက်အန္တရာယ်ကြုံ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ နှလုံးခွဲစိတ်မှုအတွက် ကုန်ကျစရိတ် လွန်စွာကြီးမားသဖြင့် စရိတ်မတတ်နိုင်သော လူနာအများစုမှာ ဆေးကုသမှု မခံယူနိုင်ဘဲ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး နှလုံးခွဲစိတ် ကုသဆောင်မှ လူနာများက ပြောကြားသည်။
နှလုံးရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသရာ၌ နှလုံးအဆို့ရှင်အပါအ၀င် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ထည့်သွင်းကုသရာတွင် သိန်း ဆယ်ဂဏန်းနှင့်ချီ ကုန်ကျနေပြီး နိုင်ငံတော် အသုံးစရိတ်မှ စိုက်ထုတ်ကျခံခြင်း မရှိကြောင်းလည်း အဆိုပါ လူနာများက ပြောသည်။
“ခရမ်း-သုံးခွဘက်က လူနာတဦးဆိုရင် နှလုံးအဆို့ရှင်တခုထည့်ဖို့ ကျပ် (၃၃) သိန်း ငွေပေးသွင်းခဲ့ရတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၈) ရက်နေ့ ငွေသွင်းပြီး နောက်တနေ့ ခွဲစိတ်တယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဟိုဆေး ဒီဆေးဝယ်တာက (၈) သောင်းကျော်ကုန်တယ်။ ဆေးရုံတက်ရက် (၃) ပတ်အတွင်း သိန်း (၄၀) ကျော်နေပြီ။ နွေရော မိုးရော စပါးလေး၊ ပဲလေး လုပ်ထားတာ ကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်” ဟု နှလုံးခွဲစိတ်ဆောင် အခန်း (၃) ရှိ လူနာတဦးထံမှ သိရသည်။
နှလုံးအဆို့ရှင် (၁) ခုတန်ဖိုးမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံလုပ် ကျပ် (၂၅) သိန်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံလုပ် သိန်း (၃၀) ကျပ် ရှိနေပြီး ဂျပန်ဖြစ် အဆို့ရှင်ကို ထည့်သွင်းသူသည် အခြား ၀န်ဆောင်စရိတ် (၃) သိန်းကျပ်နှင့် စုစုပေါင်း (၃၃) သိန်း ပေးသွင်းရသည်ဟု သိရသည်။
ကျသင့်ငွေများကို နှလုံးအထူးကု ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်လွင်၏ ရုံးခန်းမှ လက်ခံခဲ့သည်ဟု လူနာနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောသည်။
ထိုသို့ငွေမပေးနိုင်သည့်အတွက် ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားသူများလည်း ရှိကြောင်း ဆေးရုံတက် လူနာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ဒီလထဲမှာပဲ နှလုံးခွဲစိတ်ဆောင် အခန်း (၅) က ငွေမပေးသွင်းနိုင်လို့ လက်မှတ်ထိုးပြီး ဆေးရုံက ဆင်းသွားရတဲ့ လူနာတွေရှိတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ကျောင်းတိုက်တခုက ဦးပဉ္စင်းတပါးဆို နှလုံးအဆို့ရှင်တပ်ဖို့ ဆေးရုံက သိန်း (၄၀) တောင်းတယ်။ အဲဒါ မပေးနိုင်တော့ ဆေးရုံက ဆင်းသွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ အဆို့ရှင်စရိတ် တောင်းခံငွေသည် အပြင်ဆေးခန်းများနှင့် သိပ်မကွာလှကြောင်း၊ အပြင်ဆေးခန်းများက ခွဲစိတ်ခန်းစရိတ်နှင့် ဆေးရုံဝန်ဆောင်ခသာ ပိုမိုကုန်ကျခြင်းဖြစ်ကြောင်း နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်တဦးက ပြောသည်။
“နှလုံးမှာ အခန်း (၄) ခန်းရှိတယ်။ (၁) ခန်းပျက်ရင် အဆို့ရှင် (၁) ခုထည့်ရတယ်။ (၂) ခန်းပျက်ရင် (၂) ခုပေါ့။ ပျက်နေတဲ့ နှလုံးက ကျယ်နေရင် ချုပ်ပြီးကျဉ်းလိုက်တယ်။ ကျဉ်းတဲ့ အဆို့ရှင် တပ်ပေးရတယ်။ ကျဉ်းနေရင် စပရိန် ထည့်ပေးရတယ်။ နှလုံးမှာ အပေါက်တွေ့ရင် ဖာပေးရတယ်” ဟု နှလုံးခွဲစိတ်ခန်းဝင် အထူးသူနာပြုတဦးက ရှင်းပြသည်။
အင်တာနက်ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ထိခိုက်နစ်နာ
မျိုးဝင်းဇော်/ ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ၁ဝ
မကြာခဏ အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို များစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း ယင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သူတို့ထံမှ သိရသည်။
လေယာဉ်လက်မှတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးက “ကျမတို့ဆီမှာ အဲအေးရှားလက်မှတ် လာဝယ်တာရှိတယ်။ အင်တာနက် မရတော့ ဈေးနှုန်းလည်း ကြည့်မပေးနိုင်ဘူး။ ဝယ်လည်း ဝယ်မပေးနိုင်ဘူး။ ရန်ကုန် ပတ်ခ်ရိုင်ရွယ်ဟိုတယ်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အဲအေးရှား လက်မှတ်အရောင်း ရုံးခန်းဟာလည်း အင်တာနက် မကောင်းဘူးဆိုရင် ခဏ ပိတ်ထားလိုက်တယ်၊ တယ်လီဖုန်းတောင် ကိုင်ပြီး မဖြေတော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
အခြားလေကြောင်းလိုင်း လက်မှတ်များကို ၎င်းတို့ထံလာဝယ်သည့် အခါ၌လည်း ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးသို့ လက်မှတ်ရနိုင် မရနိုင် ဖုန်းဆက်မေးရကြောင်း၊ အဆိုပါရုံးများမှာလည်း ပုံမှန်အားဖြင့် အင်တာနက်ဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်ကြကြောင်း၊ အင်တာနက်ပြတ်တောက်သည့် အချိန်များတွင် ဘန်ကောက်ရုံးချုပ်နှင့် ဖုန်း၊ ဖက်စ် စသည်တို့ကိုသုံး၍ လေယာဉ်လက်မှတ် ရောင်းခြင်း၊ ဘွတ်ကင်တင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရကြောင်း ၎င်းက ပြောပြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမပေါ်တွင် လေကြောင်းလက်မှတ် အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ထားပြီး အမေရိကားနှင့် ဥရောပသွားမည့်သူများကို နိုင်ငံခြား အသက်အာမခံ ဝယ်ယူပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူတဦးကလည်း “ကျနော်က စင်ကာပူမှာ ကျနော့် ဘဏ်အကောက် ဖွင့်ထားတယ်။ ဒီကနေ အမေရိက၊ ဥရောပ သွားမယ့်သူတွေက ဗီဇာလျှောက်ဖို့ အသက်အာမခံလိုမျိုး ဝယ်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒါကို အွန်လိုင်းကနေ တဆင့်ပဲ ဝယ်ရတာ။ အခုလို အင်တာနက် သုံးမရတဲ့အချိန်ဆို ကျနော်တို့က ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ တချို့ဆို အချိန်နီးမှ ဗီဇာဝင်ခါနီးမှ အသက်အာမခံ လာဝယ်တော့ သူတို့လည်း အခက်အခဲ တွေ့ကြရတာပဲ” ဟု ရှင်းပြသည်။
အလားတူ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများသည်လည်း အင်တာနက်လိုင်းမရသည့်အချိန်တွင် ၎င်းတို့ဟိုတယ်ကို ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်း၊ တည်းမည့်ရက်ကို တိတိကျကျ ချိတ်ခြင်း၊ ဧည့်သည်အရောက် လေဆိပ်မှာသွားကြိုခြင်း စသည့်ကိစ္စအားလုံး လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ကြောင်း ပြောကြသည်။
ဟိုတယ်မန်နေဂျာတဦးက “ကျနော်တို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးတဲ့အထဲမှာ ငွေသား သိပ်မယူလာဘဲ ခရက်ဒစ်ကတ် ယူလာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို အင်တာနက်လိုင်း သုံးပြီး ငွေလွှဲပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလည်း ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ဟာ ဒီရန်ကုန် ရောက်ရင် သူ့ဘဏ်ကတ်ကို သုံးလို့မရတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ရရင် နိုင်ငံခြားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ကျနော့်အကောင့်ကို သူက ငွေလွှဲထည့်ပေး၊ ကျနော့် ဘဏ်အကောက်ထဲရောက်ရင် ကျနော်က ဒီမှာ သူ့ကို ကျပ်ငွေထုတ်ပေး ဒါတွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ ခုတော့ အင်တာနက် မကောင်းတဲ့အချိန်က များနေတော့ လုပ်မပေးနိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ကြီးများတွင် ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်းပိုင်းကစပြီး အင်တာနက်လိုင်းများ ပုံမှန်ရရှိခြင်း မရှိတော့ဘဲ မကြာခဏ ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး (၁) ကြိမ် ပြတ်တောက်လျှင် ရက်ချီ ကြာမြင့်တတ်သည်။ အင်တာနက် ပြတ်တောက်မှုမှာ လုံးဝ ချိတ်ဆက်မရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အင်တာနက်လိုင်းထဲ ရောက်ပြီးမှ ကွန်နက်ရှင်က လုံးဝ အသုံးပြု၍ မရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
ယခု ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက် ညနေမှ (၂၅) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တွင် လုပ်ငန်းအတွက် အင်တာနက် သုံးစွဲ၍မရဘဲ မန္တလေးတွင်မူ (၂၄) ရက် ညပိုင်းမှစ၍ သုံး၍မရတော့ပေ။ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်က အင်တာနက်လိုင်းများမှာမူ ပုံမှန်သုံး၍ ရနေသည်။
ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာတက်ခ်မှ အမည်မဖော်လိုသူ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတဦးက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အင်တာနက် အသုံးပြုမှုများကို ယခင် တပြေးညီ ပေးနေရာမှ ဒိုင်ယယ်အပ်၊ အေဒီအက်စ်အယ်လ် သုံးသည့် အင်တာနက်ကဖေး၊ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရရုံးဌာနများ၊ တပ်နှင့် အရေးကြီးဌာန စသဖြင့် အဆင့်ခွဲခြားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း၌ ပြဿနာတစုံတခုဖြစ်၍ သတင်းတားမြစ် ပိတ်ပင်ပင်လိုပါက အင်တာနက်ကို တဆင့်ချင်း ပိတ်ပင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြောကြားသည်။ သို့သော် ယင်းသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
Posted by justfreeman at 11:400comments
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၃ မိနစ် .
“မနက်ဖြန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမိန့်ချမှာဖြစ်တယ်။ ကျနော့်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တယောက်က အကြောင်းကြားတာပါ။ မနက်ဖြန် ၁ဝ နာရီ တရားရုံး တက်မှာပါ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နေအိမ်အချုပ်ဒဏ် ၁ နှစ်ခွဲနှင့် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုပြင်ဆင်ချက်ကို ရှေ့နေများက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး၊ နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်များလည်း ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ နှစ်ဦးက အမှုနိုင်ပြီး လွတ်မြောက်လာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျွန်ယက်တော အိမ်အတွင်း တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၌ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်နှင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ အဖြစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ရန် တရားရုံးကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများက ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေမှာ ပျက်ပြယ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ အခြေခံဥပဒေအပေါ် တည်၍ တရားစီရင်ခြင်းမှာ မလျော်ကန်ဟု အမှုပြင်ဆင်ချက်တွင် တင်ပြထားသည်။
Posted by justfreeman at 11:350comments
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၉ မိနစ် .
"၁၉ ရက်နေ့က လက်နက်ကြီးပစ်တော့ ကလေး ၃ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ အဲဒီထဲက ၁၅ နှစ်အရွယ် စောရိုဘီမှူးက ၂၁ ရက်နေ့ မနက်မှာ ဒဏ်ရပြင်းလို့ သေသွားတယ်" ဟု ကရင်ကျောင်းသားအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စာမှူးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုင်းနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်ကာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို စောင့်ရှောက်နေသည့် Free Burma Ranger (FBR) အဖွဲ့ကလည်း ကရင်ကျောင်းသားတဦး သေဆုံးပြီး၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသည့်အကြောင်းကို ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာရရှိထားသည့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် စောအယ်ကော်သောနှင့် စောစာကပရိုထူးတို့ကို FBR က ကုသပေးလျက်ရှိသည်။
တူးထားရွာတွင် လူဦးရေ ၃၅ဝ ခန့် နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အခင်းဖြစ်ပွားသည့် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းသား ၄၈ ဦး တက်ရောက်သင်ကြားနေကြောင်းနှင့် ပြီးခဲ့သည့် လဆန်းပိုင်းကလည်း မြန်မာစစ်တပ်က တူးထားရွာကိုပင် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသူ မရှိခဲ့ကြောင်း ဒေါ်စာမှူးက ပြောသည်။
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခံထားရသဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများမှာ ကျောင်းထဲတွင် စာသင်ကြားရန် ကြောက်ရွံ့နေသဖြင့် ရွာအနီးရှိ ချောင်းဘေးတွင် ယခုအခါ စာသင်နေရကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရတပ်များက ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် IDP ခေါ် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးသူများက ယခုကျောင်းလေးကို ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KNU ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်မြေများကို စစ်တပ်ဖွဲ့များက လိုက်လံထိုးစစ်ဆင်သဖြင့် အပြစ်မဲ့ ဒေသခံများ နေရပ်ရင်း စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမှု အများအပြား ရှိနေသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်အတွင်း ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၃၅ဝဝ မှာ အဆိုပါ ထိုးစစ်များကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း ဗြိတိန်အခြေစိုက် Burma Campaign (UK) ၏ ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
(ဆလိုင်းထွန်း အချက်အလက် ပေးပို့သည်။)
Posted by justfreeman at 11:330comments
မူးယစ်ဆေးဝါး လျော့ကျရန်အတွက် UNODC ပြောဆို
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၃ မိနစ် .
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မူးယစ်ဆေးဝါးပပျောက်စေရန် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို အရေအတွက် လျော့သွားအောင် လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး UNODC က အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်ကာ ယမန်နေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် သူတို့၏ အဖွဲ့အစည်း ရှင်သန်စေရေးအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး စိုက်ပျိုးကူးသန်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု UNODC က ဆိုသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း-တရုတ်နယ်စပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း-ထိုင်းနယ်စပ်၊ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတို့တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးပြီး ယင်းဒေသအတွင်း အခြေစိုက်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့၏ အမည်များနှင့်အတူ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒေသသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းက ဒုတိယလိုက်သည်ဟုလည်း UNODC အစီရင်ခံစာတွင် ထောက်ပြ ပြောဆိုထားသည်။
သို့သော် ထိုသို့သော ပြောဆိုချက်အပေါ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးစိုင်းလောင်ဆိုင်ကမူ မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေး မူဝါဒများကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကျင့်သုံးလျက်ရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်စရာအကြောင်းလည်း မရှိပါဘူး။ လိုလည်း မလိုလားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အဖွဲ့နဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးတာ ပတ်သက်မှု မရှိဘူးလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
UNODC အစီရင်ခံစာ၌ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဝ' ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း)၊ ကိုးကန့်ဒေသများတွင် ဘိန်းဖြူနှင့် စိတ်ကြွဆေးပြားများ အဓိက ထုတ်လုပ်နေသည်ဟု အမေရိကန်နှင့် ထိုင်း မူးယစ်တာဝန်ရှိသူများက ယူဆထားကြသည်” ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ထိုပြောဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးက ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်တွင် UWSA သည် ၎င်းထိန်းချုပ်ထားသော နယ်မြေကို ဘိန်းကင်းစင်နယ်မြေဟု ကြေညာခဲ့ပြီး တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားကြောင်းနှင့် ပညာပေးခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ထားကြောင်း ချေပပြောဆိုသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာအဖွဲ့ လက်နက်ချအပြီးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဒေသများ၌ ဘိန်းအစားထိုး စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်လာခဲ့သဖြင့် ၁၉၉၆ မှ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်မြေ ဧက ၈၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျခဲ့သော်လည်း စိတ်ကြွဆေး ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာသည်ဟု UNODC အစီရင်ခံစာက ဆိုထားသည်။
ရှမ်းပြည် မူးယစ်ဆေးဝါးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးခွန်စိုင်းကလည်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးနေသော ဒေသများသည် နအဖ အုပ်ချုပ်သည့် ဒေသများဖြစ်သဖြင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးမှု ဆက်စပ်ခြင်း မရှိနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။
သူက “ဒီလောက် လက်နက်အင်အား ပြည့်စုံတဲ့ နအဖ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နေရာကို ဘယ်အဖွဲ့က ရူးရူးမိုက်မိုက် ဝင်ပြီး ဘိန်းစိုက်မှာလဲဗျာ။ ဘိန်းစိုက်ပြီး ရလာတာတွေကို နအဖဆီကို အခွန်ဆက်၊ နအဖ က ခွင့်ပြု၊ အဲလိုနဲ့ သဟဇာတတွေ ဖြစ်နေတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
၂ဝဝ၉ ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘိန်းစိမ်း တန်ချိန် ၃၃ဝ ခန့်ထုတ်လုပ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁ဝဝ ခန့် တန်ဖိုးရှိကြောင်းနှင့် ဘိန်းဖြူရောင်းချမှုမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၆ဝ ခန့် ရရှိကြောင်း UNODC အစီရင်ခံစာတွင် ဆိုထားသည်။
မြန်မာအသင်း အာရှဖလားဝင်ခွင့် ဆုံးရှုံး
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၆ မိနစ် .
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ AFC Challenge Cup – 2010 အကြိုဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွင် မြောက်ကိုရီးယား အသင်းကို ယမန်နေ့က ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် မြန်မာအသင်း၏ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် အာရှဖလားဝင်ခွင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုလ်စွဲသည့်အသင်းသည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် ကာတာနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် အာရှဖလား ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲသို့ တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့၌ မြောက်ကိုရီးယား အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၅ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြောက်ကိုရီးယားက ကမ္ဘာ့ဖလားတောင် ခြေစစ်ပွဲအောင်ထားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ ဘောလုံး အဆင့်အတန်းချင်းက သိပ်ကွာပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် သမ္ဘာရော၊ ကစားအားရော ပိုကောင်းတဲ့ အသင်းကို ရှုံးရတဲ့အတွက် အရမ်းတော့ ဝမ်းမနည်းမိပါဘူး။ အုပ်စုတက်ပြီး ဆီမီး (အကြိုဗိုလ်လုပွဲ) ရောက်တာကိုပဲ ကျေနပ်ရမှာပါပဲ” ဟု ဂိုးလ် အားကစားဂျာနယ် အယ်ဒီတာ ဦးကိုကိုကြီးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သီရိလင်္ကာ ကိုလံဘိုမြို့ရှိ ဆူဂါသာဒါဆာ (Sugathadasa) ကွင်း၌ မြောက်ကိုရီးယားက မြန်မာဘက်သို့ ပထမပိုင်း ၆ မိနစ်၊ ၁၂ မိနစ်နှင့် ၁၃ မိနစ်တို့တွင် ၃ ဂိုး၊ ဒုတိယပိုင်း ၇၃ မိနစ်နှင့် ၈၅ မိနစ်တွင် ၂ ဂိုး သွင်းယူခဲ့သည်။ ဂိုးများကို ချိုးချိုလ်မန်းက ၂ ဂိုး၊ ချိုမြောင်ဟို၊ ပတ်ဆောင်ချိုနှင့် ကင်ဆောင်ယောင်တို့က ၁ ဂိုးစီ သွင်းယူခဲ့ကြသည်။
“ဖလားတော့ ရစေချင်တာပေါ့။ ရှုံးသွားတော့လည်း ဘာတတ်နိုင်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ အရှက်ပြေ ချေပဂိုးလေး ၁ ဂိုးလောက်တော့ ရသင့်တယ် ထင်တယ်ဗျာ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ ဘောလုံးပရိသတ်တဦးက ပြောသည်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း ကလပ်အသင်းများသည် နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင် အသင်းကို အထောက်အကူ မပြုနိုင်သေးကြောင်း ဝါရင့် အားကစား ကလောင်ရှင် ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) က ဆိုသည်။
“ခုခေတ်က ပါဝါ (ခွန်အား) ရော၊ အမြန်နှုန်းရော သုံးပြီး ကစားရတဲ့ခေတ်။ သူများနိုင်ငံက ကစားသမားတွေက ဘောလုံးသမားပုံ ပေါက်တယ်။ ဒီက ကလေးတွေက မိနစ် ၇ဝ ကျော်ရင် မဆော့နိုင်တော့ဘူး။ ကစားအား ကျပြီ” ဟု သူက ပြောသည်။
AFC Challenge Cup - 2010 ကို ကိုလံဘိုတွင် ယခုလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေပြီး မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်းသည် အုပ်စု - က တွင် အိမ်ရှင် သီရိလင်္ကာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ၊ တာဂျကစ္စတန် နိုင်ငံတို့နှင့် တအုပ်စုတည်း ကျရောက်ခဲ့သည်။
အုပ်စုအဆင့် ပွဲစဉ်များတွင် အိမ်ရှင် သီရိလင်္ကာကို ၄ ဂိုး ဂိုးမရှိ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်ကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကာ အုပ်စု ဒုတိယဖြင့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
“ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ထူးခြားတာတခု တွေ့ရတာကတော့ အရင်တုန်းက ပွဲတွေလို ရန်ဖြစ်တာတို့၊ အနီကဒ်နဲ့ အထုတ်ခံရတာတို့ မတွေ့ရဘူး။ အရှုံးကို လက်ခံတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတော့ တွေ့လာရတယ်” ဟု ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) က ပြောသည်။
မြန်မာလက်ရွေးစင် အသင်းသည် ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီခွဲ (သီရိလင်္ကာစံတော်ချိန်) တွင် ဆူဂါသာဒါဆာ (Sugathadasa) ကွင်း၌ အုပ်စုပွဲစဉ်တွင် ရှုံးနိမ့်ထားသည့် တာဂျစ်ကစ္စတန် လက်ရွေးစင် အသင်းနှင့် တတိယနေရာလုပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်။
ထိုပွဲစဉ်အပြီးတွင် မြောက်ကိုရီးယားအသင်းနှင့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ပထမပွဲစဉ်တွင် တာဂျစ်ကစ္စတန်အသင်းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် တာမင်နစ္စတန်အသင်းတို့ ဗိုလ်လုပွဲ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် အာရှဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် တကြိမ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ယင်းနှစ်တွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာအသင်း၏ နည်းပြချုပ်မှာ ဦးတင်မြင့်အောင်ဖြစ်ပြီး လက်ထောက်နည်းပြများမှာ ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်းနှင့် ဦးစိုးမိုး၊ ဂိုးနည်းပြမှာ ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဖြစ်ကာ အသင်းခေါင်းဆောင်မှာ မျိုးမင်းထွန်း ဖြစ်သည်။
ယခုလ ၃ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA) က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ရပ်တည်ချက်၌ မြန်မာအသင်းသည် အဆင့် ၁၄၁ တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ ဘောလုံးအဆင့်အတန်းကို အမီလိုက်ရန်နှင့် လက်ရွေးစင် အသင်း အောင်မြင်ရန် ထွားကျိုင်းကာ အရပ်အမောင်းကောင်းမွန်သည့် ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ လူငယ်များကို ဘောလုံးအကယ်ဒမီကျောင်းများတွင် စနစ်တကျ ကျွေးမွေးပြုစုပျိုးထောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အားကစား ကလောင်ရှင်က ဆိုသည်။
“၃ နှစ်လောက် အားလုံးဝိုင်းပြီး လူငယ်သွေးသစ် မွေးမြူတာကို တွန်းလုပ်လိုက်ရင် မြန်မာအသင်း ရလဒ်တွေ ပြန်တက်လာမယ်လို့ ကျနော် ယုံတယ်။ ဒါကတော့ ကလပ်ပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးတွေရဲ့ ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ ဘောလုံး အကယ်ဒမီတွေကိုပဲ အားကိုးရမှာပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
မဟရင် မနေနိုင်တာကလွဲလို့ … မဖွရင် မနေနိုင်တာကလွဲလိ...
မြန်မာ့ကာတွန်းလောက ဆင်ဆာရှစ် (၃) ခုကို ဖြတ်သန်းနေရ...
မြန်မာအမျိုးသမီးများ သစ်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘဝပျက်ြ...
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြရန် နိုင်ငံရေးသမား ၂ ဦး ပြည်ပတွင...
အမေရိကန်သံရုံး ယာယီတာဝန်ခံနှင့် NLDဗဟိုကော်မတီ တွေ...
ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်တပ်က စနစ်တကျ တပ်ဆုတ်ခြင်းဖြစ်ဟု...
နှလုံးခွဲစိတ်မှု စရိတ်ကြီး၍ လူနာများ အသက်အန္တရာယ်ကြံ...
ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ဦးကို အန်အယ်ဒီ CEC အတည်ပြု...
ဆရာကြီး အီကြာကွေး၏ စာအုပ်များ လှူဒါန်း
မောင်တော ကျေးရွာများတွင် အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်
နယ်ခြားစောင့်တပ်အရေး ဝ’ ခေါင်းဆောင်နှင့် စရဖ တွေ့ဆ...
ဦးတင်ဦး လွတ်မြောက်မှု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝမ်းသာ
အတုအယောင် မြန်မာ မဖြစ်ရဟု ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန်ြေ...
ဆိပ်ကမ်းများလည်း ပုဂ္ဂလိကကို လွှဲမည်
မတော်တဆမှုကြောင့် ရွှေတူးသမားများစွာ သေဆုံး
နာမည်ကျော်အဆိုတော်များ နေပြည်တော်တွင် သင်္ကြန်ကျမည်
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ အန္တရာယ်အကြောင်း အစီရင်ခံ...
မြန်မာဓာတ်ငွေ့အတွက် တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေ...
ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရန် နယ်စပ်မြို့တမြို့...
အန်အယ်ဒီ ဗဟိုဦးစီး ဖွဲ့စည်းသည့် အပေါ် ဒေါ်စု အားရကေ...
မီဒီယာသမားများ အရေးတော်ပုံတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရ...
မြန်မာ-လာအိုနယ်စပ် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပထမဆုံး မျက်မမြင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ...
သွေးနှောနည်းဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူမျိုးပျောက်ရန် ...
အကျိုးပြုသီချင်းများ ဆုချီးမြှင့်ရန် ပြန်ကြားရေးြ...
နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းရေး ၀နှင့် စစ်အစိုးရ တင်းမ...
မြန်မာရေတပ် ဦးစီးချုပ် အိန္ဒိယသို့ရောက်
အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး ပဏာမ လျာထား...
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ကြည့်ရှုရန် နွေစပါး ဟန်ပြစိုက်
မလေးရှား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ မြန်မာ (၁,၀၀၀) ကျော် ...
ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ (၃၀၀) ထက်မနည်း ဦးတေဇ ရမည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခွင့် မြန်မာအင်ဖိ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၆ ဦး ထောင်တွင်း အစာငတ်ခံ ဆန္ဒ...
ဟတ်ကြီး ရေကာတာ လေ့လာရေး ပြန်စပြီ
နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြဿနာ
ဦးခေါင်းမဲ့ ရုပ်အလောင်း လှော်ကားတွင် တွေ့ရှိ
အမျိုးသမီး ပြိုင်ကားလေးမောင်း ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
ရန်ကုန် အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများအတွက် ကြံ့ဖွံ့က သန်း...
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာလည်း မသက်သာ
ကလေးစစ်သား စုဆောင်းသူ ၄၄ ဦး အရေးယူခံရ
စင်ပြိုင်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု
ထိုင်းလုပ်ငန်းအချို့ မြန်မာအလုပ်သမားများအပေါ် မှီခု...
ရွှေပြည်သာတွင် A (H1N1) သံသယ လူနာများ ထပ်တိုး
အစိုးရသတင်းပေးများအတွက် ဝေါ်ကီတော်ကီများ ထုတ်ပေး
သင်္ကန်းကျွန်းဈေး မီးလောင်မှု မီးသတ်နှင့်စည်ပင် မကျေ...
စတိတ်ရှိုးကြည့်ချင် အရက် (၁) ပါကင်ဝယ်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အသက်အန္တရယ်စိုးရိမ်
ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရန် တောင်းဆိုပြီး MDC ပြန်လည်အသက်ဝင...
ကင်တာနာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ခွင့်မရဘဲ ပြန်...
နေ့ကောင်း ရက်သာများ ကြုံရမည်
ရန်ကုန်ကျောင်းတချို့ ဦးတေဇတို့ ရမည်
ကင်တားနား၏ အစီရင်ခံစာ ပြည့်စုံမည်မဟုတ်ဟု တိုင်းရင်...
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဘန်ကောက်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူ
ဘိလပ်မြေဈေး ထောင်တက်နေ၍ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ...
လူကြိုက်နည်း စက်မှု (၁) စက်ဘီးကို ပြိုင်ပွဲဖြင့် အေ...
အသက်မပြည့် မြန်မာမိန်းကလေးငယ်များ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ...
မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်စခန်း ရေပြဿနာ ကြုံနေ
ကျောက်မဲမှာ A (H1N1) ပိုးရှိသူ ၆ ဦး တွေ့ရှိ